रोबलोक्स शर्ट टेम्पलेट्स विचार (२०२०) - अब तपाईंको आफ्नै शर्ट सिर्जना गर्नुहोस् - गेमि।
रोब्लक्स एक अनलाइन प्लेटफर्म हो जुन विश्वभरिका खेलाडीहरू एक साथ ल्याउँदछ। खेलाडीहरूले अन्तर्क्रियात्मक थ्रीडी खेल खेल्नका साथै उनीहरूको खेलहरू सिर्जना गर्न सक्दछन्। प्रयोगकर्ताहरूलाई रमाईलो बनाउनको साथमा, एक लोकप्रिय सुविधा भनेको रोब्लक्स कपडा हो। रोब्लक्समा कपडाका रचनाहरू केही रचनात्मकतामा संलग्न हुने र एक विशाल खेलाडी पूलमा कलात्मक पक्ष देखाउनको लागि उत्तम तरिका हो।
यसबाहेक, चिसो पोशाक सिर्जनाले खेलाडीहरूलाई अनौंठो उपकरण र सफ्टवेयर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूले रोब्लक्सको परे उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्दछन्। सबैजना तपाइँको रचनात्मक पोशाक हेर्न सक्षम हुनेछन्। तपाईं अन्य खेलाडीहरूमा उनीहरूसँग व्यापार गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
रोब्लक्स शर्ट टेम्पलेट के हो?
रोबलोक्सले यसको टेम्प्लेट टी-शर्टहरू, शर्टहरू, र प्यान्टको साथ प्रयोगकर्ता प्रोफाइल अवतारहरू अनुकूलित गर्न एक उत्तम तरिका प्रदान गर्दछ। तपाईंको अवतारको पूर्ण रूपले अनुकूलित कपडाहरू यो रचनात्मक दृश्य हो तपाईंको पूरा प्रोफाइलमा तपाईंको प्रोफाइल प्रदर्शन गर्न। यसका अतिरिक्त, तीनिहरूले तपाईंलाई थ्रीडी ग्राफिक्स र एनिमेसनको प्रविधिहरूको बारेमा जान्न मद्दत गर्छन्।
तपाईं आफ्नो शर्ट र प्यान्ट टेम्प्लेट सिर्जना गर्न रोब्लक्सको बिल्डर क्लब सदस्य हुनुपर्दछ। तर चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं नि: शुल्क उपलब्ध टेम्पलेटहरू प्रयोग गरेर तपाईंको टी-शर्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो लेखले तपाईलाई आफ्नै रोब्लक्स शर्ट टेम्पलेट सिर्जना गर्न मद्दतको लागि एक चरणवाट दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
के रोबलोक्सले FPS अनलकहरूलाई अनुमति दिन्छ?
तपाईंको कस्टम रोब्लक्स शर्ट बनाउनका लागि विचारहरू:
तपाईको रोब्लक्स शर्ट बनाउन प्रेरणा पाउन कठिन हुन सक्छ। यस गाईडमा, हामी तपाईंलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाको साथ मद्दत गर्नेछौं। आउनुहोस् केहि राम्रा रोब्लक्स शर्ट विचारहरूमा एक नजर राख्दछौं। तपाईका रोब्लक्स शर्टहरूलाई डिजाईन गर्ने क्रममा यो सहयोगी हुन सक्छ।
१. पिनरेस्ट ब्राउज गर्नुहोस्
Pinterest इन्टरनेट को पहिलो पृष्ठ हो जब यो सामग्री को लागी आउँछ। तिनीहरूसँग तस्वीरहरूको विशाल पुस्तकालय छ।तपाईं सजिलै रोबलोक्स शर्ट विचारहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ टी-शर्ट को लागी धेरै प्रकारका जेनेरहरू छन्। यी ती प्रयोगकर्ताहरूका लागि लाभदायक हुन् जसले डिजाईनको साथ सुरू गर्दछन्।
रोबलोक्स सामग्री निर्माण सरल छ, तर विचारहरू के फरक पर्दछन्। प्लेटफर्ममा धेरै प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना विचारहरू साझा गर्छन्। यो ती प्रयोगकर्ताहरूको लागि आदर्श हो जसले अवतारहरूलाई हेरेर आनन्द लिन्छन्।
शर्टको केन्द्रबिन्दु मध्य क्षेत्र हो। सबै मुख्य डिजाइन विचारहरू यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त छन्। प्रयोगकर्ताहरूले यस प्रक्रियामा विभिन्न पक्षहरू थप्न सक्दछन्।
हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले पहिले। मा काम गर्नुहोस् केन्द्रबिन्दु । यो दिमागमा विचार गर्नेहरूका लागि लाभदायक छ। तपाईंले प्रदर्शन अनलाइन देखाउने रूपमा यो प्रदर्शनमा आउनेछ।
A. विधा खोज्नुहोस्
प्लेटफर्ममा शर्टका लागि विभिन्न विधाहरू उपलब्ध छन्। तपाइँ तपाइँको विधा फेलाएर चरित्र शर्ट को प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ। खेलहरूले पनि यस कारकमा ठूलो भूमिका खेल्छ।
यदि तपाइँ शान्त र चिसो चरित्र चाहनुहुन्छ भने, समुद्र तट र अन्य शर्ट आईडियाहरू उत्कृष्ट हुन् - प्रयोगकर्ताहरू जसले खेल चाहन्छन् तिनीहरूको अनुभवको लागि फाइदाजनक देखिन्छन्। क्याटल शर्टको माध्यम बाट लडाई रोयल र फाइटिंग गेम रमाईलो छ।
कसरी रोबलोक्स शर्ट टेम्प्लेट बनाउने?
रोब्लक्स शर्ट टेम्प्लेटहरू तपाइँको TShirts लाई अनुकूलित गर्न एक उत्तम तरिका हो। यसले तपाइँलाई समुदायमा थप गर्न सक्षम गर्दछ। को रोब्लक्स मुद्रा प्रत्येक दिन अनौंठो अन्तरदृष्टिको साथ अगाडि बढिरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो सूचीमा थप्न अद्वितीय डिजाइनहरू गर्न सक्दछन्। यो सेक्सनमा, हामी तपाईले कसरी खेलमा अद्भुत टी-शर्टहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जाँच गर्नेछौं।
सुरु गर्दै -
तपाईं आफ्नो प्रणालीमा टेम्पलेटहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, सम्पादन गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई ग्राफिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर अनुकूलित गर्नुहोस् जस्तै Adobe Photoshop, MS Paint, वा GIMP।
नि: शुल्क र सबैभन्दा सीधा लुगा भनेको अवतारको अगाडि टी-शर्ट लागू हुन्छ। जे होस् उनीहरूसँग सीमित सुविधाहरू छन्, तपाईं अझै पनि आफ्नो सिर्जनात्मकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। शर्ट र प्यान्ट टेम्प्लेट एक अवतारको सम्पूर्ण शरीरको वरिपरि लपेट्नुहोस्, तपाईंको प्रोफाइललाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै।
डिजाईन गर्दा, टेम्प्लेटको प्रत्येक अंश समायोजन गर्न विशेष ध्यान राख्नु पर्छ (बाँया, दाँया, फ्रन्ट, र तल)। साथै, केहि अवतारहरू जस्तै 'सर्किट ब्रेकरहरू' लुगा डिजाइनमा अनुमति दिदैनन्।
टेम्पलेटको अपलोड शर्ट र प्यान्टको लागि असफल हुन्छ यदि अपलोड गरिएका आयामहरू सही छैनन्।
एक टी शर्ट बनाउने -
रोब्लक्स कपडा लाइब्रेरीले नि: शुल्क तपाईंको अवतार डिजाइन गर्न टी-शर्ट टेम्पलेट प्रदान गर्दछ। आदर्श रूपमा, १२8 * १२8 पिक्सेलको छवि एक अवतारको अगाडि लागू हुनका लागि उपयुक्त छ।
यहाँ चरणहरू छन् जुन तपाईले अनुसरण गर्नु पर्दछ तपाईको प्रोफाईलको लागि उत्कृष्ट टी-शर्ट डिजाइन सिर्जना गर्न।
'रोबलोक्स टी-शर्ट टेम्पलेट' पृष्ठमा जानुहोस्।
तपाईंको पीसीमा टेम्पलेट बचत गर्नुहोस्।
फोटो सम्पादक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी टेम्प्लेट खोल्नुहोस् र सम्पादन गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध उपकरणहरू वा प्रीमियम सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। लाइटरूम, फोटोशप, र जिम्प २ केहि विकल्पहरू छन् जुन तपाईंले प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ।
टेम्पलेट बढाउनको लागि तपाईंको सिर्जनशीलता र छवि सम्पादन उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं एक लोगो थप्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको अवतारमा एक हास्यास्पद नाम थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो भिडियोको लागि आकर्षक अवतार बनाउन थुप्रै भिडियो ट्यूटोरियलहरूबाट पनि मद्दत लिन सक्नुहुनेछ।
टेम्पलेट आकार का पालन गर्नुहोस्। अवतारको अगाडि र पछाडि भाग १२8 * १२8 पिक्सल हुनु आवश्यक छ। बाँया र दायाँ भागहरू * 64 * १२8 पिक्सेलको वरिपरि हुनु पर्छ।
तपाईंको धडको माथिल्लो र तल्लो भागहरू लगभग १२8 * p 64 पिक्सेलको हुनुपर्दछ। * 64 * p 64 पिक्सेलको सानो वर्ग हात वा खुट्टाको माथि र तलको अंश हो।
तपाईंको डिजाइन बचत गर्नुहोस्, र तपाईं अपलोड गर्न तयार हुनुहुन्छ।
डिजाईन अपलोड गर्दै -
प्रत्येक टेम्प्लेटमा मध्यस्थकर्ताको समीक्षा गर्नुपर्नेछ अन्तिम हुनु अघि।
रोब्लक्स वेबसाइटको नेभिगेट गर्नुहोस् पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस् । टी-शर्ट, प्यान्ट वा शर्टबाट विकल्प छनौट गर्नुहोस्। तपाईंले शर्ट वा प्यान्टको लागि भुक्तान गरेर सदस्यता लिन आवश्यक छ।
'छनौट फाइल बटन' मा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो डिजाइन अपलोड गर्नुहोस्। तपाईंको अपलोड गरिएको अवतारमा तपाईंको नाम दिनुहोस्।
एक पटक मध्यस्थकर्ताहरूले डिजाइन स्वीकृत गरे पछि, यसले तपाईंको सिर्जनामा ​​प्रदर्शन गर्दछ। तपाईं त्यो अवतार प्रयोग वा खेलाडीहरूको रोब्लक्स समुदायमा बेच्न सक्नुहुनेछ।
केहि सामान्य मुद्दाहरु:
छवि टेम्प्लेट अपलोड गर्न सक्षम छैन:निश्चित गर्नुहोस् कि आकार विशिष्टताहरू सहि छन् र सही नाम दिइएको छ।
अनुमोदनको लागि समय:मध्यस्थकर्ताहरूले टेम्पलेट स्वीकृतिका लागि एक वा दुई घण्टा लिदैन। निश्चित गर्नुहोस् कि यो jpeg, png, र BMP जस्तै एक उचित छवि ढाँचा हो।
के तपाईं सदस्यता बिना कपडा बेच्न सक्नुहुन्छ?- होइन, तपाईं एक बिल्डर्स क्लब सदस्यता आवश्यक बेच्नुहोस् वा अवतारहरूलाई बिड गर्न।
रोब्लक्सले व्यक्तिलाई खोजी गर्नका लागि टेम्पलेटको नाम र विवरण कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं मूल्य सेट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको रोब्लक्स कपडाको विज्ञापन गर्नुहोला, जुन हराउनु अघि २ hours घण्टा सम्म चल्छ।
मलाई आशा छ कि यस ट्यूटोरियलले रोबलोक्स वेबसाइटमा नि: शुल्क तपाईंको अनुकूलित टी-शर्ट सिर्जना गर्न विस्तृत विवरण दिएको छ। रोब्लक्स कपडा तपाईंको खाताको लागि अद्वितीय अवतार बनाउने र सँगी समुदायका सदस्यहरूमाझ लोकप्रियता कमाउने उत्तम तरिका हो।
रोब्लक्स धेरै अनौंठो खेलहरू, थ्रीडी गेमि experience अनुभव, र सामाजिक अन्तरक्रियात्मक मार्फत ग्यारेन्टी गरिएको छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको लुकेका रचनात्मक वृत्ति प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
क्रोमबुकमा रोब्लक्स - सम्भव छ?
टम्बलर सुरक्षित मोडको वरिपरि पाउनुहोस्
कति प्रयोगकर्ताहरू डिस्नी प्लस हेर्न सक्छन्
उत्तम र्याप बीट बनाउने सफ्टवेयर
प्रस्ताव बिना नि: शुल्क लुक्स कसरी प्राप्त गर्ने
कसरी क्रोमकास्ट एक्सटेन्सन डाउनलोड गर्ने
नेटफ्लिक्स day० दिने नि: शुल्क परीक्षण क्रेडिट कार्ड छैन
डेस्कटप विन्डोज १० का लागि किक